ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျ | November 2019
အန်းဒရွိုက် DiskDigger အပေါ်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံ Recover
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်ကြွလာသောအခါအများစုကတော့, သင်တို့နှင့် internal memory ကို Android ကနေဓါတ်ပုံတွေကို recover လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယခင်ကဆိုက်အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ကို Android ကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့နည်းလမ်းများစွာ (Android ပေါ်မှာ။ Data Recovery ကိုကြည့်ပါ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် program တစ်ခု run နေပါဝင်ခဲ့ပါသည်, ထိုစက်ကိရိယာနှင့်နောက်ဆက်တွဲပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
Data Recovery - R-Studio က
ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူ software ကို R-Studio ကတစ် hard disk ကိုသို့မဟုတ်အခြားမီဒီယာဖိုင်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ယူသူတို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအတော်လေးမြင့်မားသောစျေးနှုန်းနေသော်လည်းများစွာသော R-Studio ကဖို့ကပိုနှစ်သက်, ထိုသို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ Update ကို 2016: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေသုံးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယခုအချိန်တွင် program ကို, ရုရှအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကို Android MobiSaver အခမဲ့အပေါ်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူဆော့ဖျဝဲ
ယနေ့တွင်အန်းဒရွိုက်အခမဲ့အဘို့အလာမယ့်အခမဲ့ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကို EaseUS Mobisaver ပြသပါ။ ဒါကြောင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကအားလုံးကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခါ, သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အဆက်အသွယ်များနှင့် SMS စာများပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ Android ပေါ်မှာ root access ရမှမည်သို့: ကိုချက်ချင်းအလုပ်၏အစီအစဉ်သည် device ကိုအပေါ်တစ်ဦးအမြစ် access ကိုလိုအပ်တယ်, သတိပေးကြပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ဖိုင်များကို Restore R.Saver
တစ်ချိန်ကဒေတာဆယ်တင်ရေးတို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောအခမဲ့ tools များနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည်ထက်ပို, ဒီအချိန်ငါ R.Saver အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. ကို format hard drive ကိုကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေနဲ့ data တွေကို recover နိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြကုန်အံ့။ ဤဆောင်းပါးသည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအမျိုးမျိုးသောစတိုးဆိုင်ကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြု, SysDev Laboratories ကတီထွင်, သူတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များ၏ပေါ့ပါးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
Recuva ကို - ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို Recover
အခမဲ့ Recuva ပရိုဂရမ် - (လူသိများတဲ့ utility ကို CCleaner ကိုကဲ့သို့တူညီသောဆော့ဖ်ဝဲရေးသူထံမှ) တစ်ဦးကောင်းဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူ NTFS, FAT32 နဲ့ ExFAT အဖြစ်ကို USB drive ကို, မှတ်ဉာဏ်ကဒ်, hard drive ကိုသို့မဟုတ်အခြားသိုလှောင်မှုကိရိယာမှဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး tools များထဲကတစ်ခု။ ယင်းကိုပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း, လုံခြုံရေး, ရုရှ interface ကိုဘာသာစကား, သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်မလိုအပ်ပါဘူးအိတ်ဆောင်ဗားရှင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်: အအစီအစဉ်၏အားသာချက်များများထဲတွင်။
Windows ကို USB flash drive တစ်ခု format နဲ့ restore လုပ်နည်း ... အ format နဲ့ဖြည့်စွက်မပေးနိုင်သလဲ
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဒီနေ့တစ်ဦးချင်းစီကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူမဟုတ်, တဦးတည်း၏အက USB flash drive ကိုရှိသည်။ တခါတရံမှာသူတို့ကသင်တစ်ဦးကို flash card ကိုမှအားလုံးဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့လိုတဲ့အခါရုံအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်များအတွက် file system ကိုပြောင်းလဲနေသည့်အခါ, ဥပမာ, ကို format ချင်ကြတယ်။ အများအားဖြင့်, ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုအမြန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိကွောငျးဖြစ်ပျက်: "Windows ကိုပုံစံဖြည့်စွက်လို့မရဘူး" (ကြည့်ပါ။
Laptop ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အပူ။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
လက်တော့ပ်အပူလွန်ကဲ - ခရီးဆောင်ကွန်ပျူတာများကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အသုံးအများဆုံးပြဿနာ။ အချိန်အပူများ၏အကြောင်းရင်းဖယ်ရှားပစ်မပါဘူးဆိုရင်, ကွန်ပျူတာနှေးကွေးစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး, နောက်ဆုံးမှာဖြိုဖျက်ပါဘူး။ သူတို့ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဤပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဘို့အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများအတိုင်းဆောင်းပါး, အပူ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများဖော်ပြသည်။
Windows ကိုပြန်လည်ပြီးနောက် ... အွန်လိုင်းအနည်းငယ်အကြံပေးချက်များအလုပ်လုပ်မပါဘူးဆိုရင်
နေ့သည်ကောင်းသော။ အသစ်တစ်ခုကို Windows ကို install အခါ, စည်းကမ်းအတိုင်း, system ကိုအလိုအလျှောက်အများကြီးရွေးစရာများ (ထားတစ်လောကလုံးမောင်း firewall က, etc ၏အကောင်းဆုံးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရွေးချယ်) ညှိ။ အလိုအလျှောက်ချိန်ညှိသည်မဟုတ် - ဒါပေမယ့်ဒါအချို့သောအချိန်လေးကို Windows ပြန်လည်အခါတက်အနာ။
အစောပိုင်းကငါပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover နှင့်ချပ် hard drive တွေနဲ့ flash drives တွေကိုထံမှဒေတာကိုပြန်ဆယ်နှစ်ခုအစီအစဉ်များအကြောင်းကို wrote: BadCopy Pro ကို Seagate ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးဤအချိန်အတောအတွင်းကအကြောင်းများထဲမှထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်ကိုဖြစ်လိမ့်မည် - eSupport UndeletePlus ။ ယခင်နှစ်ခုမတူဘဲ, ဒီ software ကိုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေအခမဲ့ဖြစ်တယ်, အများကြီးလျော့နည်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းမရှိ။
USB flash drive ကို (HDD) format ကိုမေတ္တာရပ်ခံနှင့်ပေါ်မှာဖိုင်တွေ (Data) ခဲ့ကြ
နေ့သည်ကောင်းသော။ သငျသညျအပြေး, တုတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, ပြီးတော့ Bam ... ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်နေချိန်တွင်မှားယွင်းမှုတစ်ခုပြသထားတယ်: "drive ကိုအတွက် disk ကို format ချမထားဘူး ... " (ပုံ 1. ဥပမာ) ။ သင် flash drive ကိုယခင်ကချပ်ကအပေါ်ဒီတော့ထွက် (backup ဖိုင်တွေ, စာရွက်စာတမ်းများ, မော်ကွန်းတိုက်များနှင့်ဒေတာခဲ့ကြသည်ထားပြီးကြောင်းသေချာပေမယ့်။
Android အတွက်တစ်ဦးနှင့် internal memory အဖြစ်ကို format တစ်ခု SD ကဒ်ကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အန်းဒရွိုက်၏ခေတ်သစ်ဗားရှင်းကမလုံလောကျသညျ့အခါအသုံးပြုမှုကိုအများကြီးထက်ဖုန်းရဲ့ internal memory အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်တွင် SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကို format ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သျောလညျးမဟုတျဘဲအပေါငျးတို့သအရေးကြီးသောအရာနားလည်သဘောပေါက်: ဤကိစ္စတွင်အတွက်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပုံစံလာမယ့်မှ (- နောက်ပိုင်းတွင်ဆောင်းပါး၌ဆိုလိုသည်) ဒီယူနစ်မှအထူးချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Double-click နှိပ်ပြီး (CPC): မိမိတို့လက်နှင့်အတူပြုပြင်ခြင်းကွန်ပျူတာမောက်စ်
ကွန်ပျူတာနည်းပညာအားလုံးအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးသော့ချက် - ခြောလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလုပ်နေတာသမျှနီးပါးအမြဲနှိပ်ဖို့လိုအပ်: ကဂိမ်းသို့မဟုတ်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်တစ်ဦးအထိခိုက်မခံယခင်ကအဖြစ်မကြာခဏဖြစ်ပျက်မှစတင်ကာကို double-click နှိပ်ပြီး (CPC) ဖြစ်တာတွေရပ်စဲ: t ကို။
တစ်ဦးပျက်စီးသွားသော CD / DVD ကို discs တွေကိုဖိုင်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်ကူးယူဘို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို
မင်္ဂလာပါ အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများတွေ့ကြုံကြပါပြီ, ကျနော်ထင်, စုဆောင်းခြင်း၌တည်ရှိ၏သေးငယ်တဲ့ CD / DVD ကို drive ကိုမဟုတျပါဘူး: စသည်တို့ကိုအစီအစဉ်များ, ဂီတ, ရုပ်ရှင်, အတူဒါပေမယ့် CD-ROM drive တခုလည်းမရှိတဦးတည်းအားနည်းချက်ဖြစ်ပါသည် - သူတို့ကအလွယ်တကူပါ (disc ကိုဗန်းထဲမှာတခါတရံပင်မသေချာသောဝန်ကုတ်နေကြသည်။ ယနေ့အဘို့မိမိတို့အနိမ့်စွမ်းရည်အကြောင်းကို :) တိတ်ဆိတ်စွာ) ။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ရုတ်တရက်ထို့နောက်ရိုက်, စာသားရိုက်နှိပ်, တည်းဖြတ်, နှင့် - ကွန်ပျူတာအလင်းကိုပိတ်ထားပျက်ကျ (အမှားသို့မဟုတ်ရိုးရိုးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပိတ်လိုက်အချို့အကြောင်းပြောပြ: ငါတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲမနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူမကြာခဏအလုပ်လုပ်သူအများအပြားထင် ပြည်တွင်းရေးအမှား) ။
ဘယ်လို Windows နဲ့စနစ် disk ကို backup လုပ်ထားပါစေနှင့် (ဘာမှလျှင်) ကပြန်ပေးမည်မှ
နေ့သည်ကောင်းသော။ Backup တွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေကို (လည်း backup လုပ်ထားကိုခေါ်), နှင့်အခြားမည်သူမဆိုမ: ရှိပါသည်အသုံးပြုသူများကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှအမြဲတမ်းနေ့ကကြွလာ, ဒုတိယအုပ်စုကို၏အသုံးပြုသူများသည်ပထမဦးဆုံးသို့သွား ... ကောင်းပြီ🙂 Morales အထက်တွင်ချုပ်ခံခဲ့ရသည် Windows ကိုပြန်-up, မိတ္တူအပေါ်အားကိုးကြောင်းသုံးစွဲသူများက (သို့မဟုတ်လုံးဝမသူတို့ကိုဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုသတိပေးဖို့ကသာဆိုတဲ့အချက်ကိုညွှန်ကြားနေသည် PE) ။
Startup လုပ် Boot တက်ကို Windows မှာက Black screen ကို။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
မင်္ဂလာပါ "ဒါဟာရေနံဆီများကဲ့သို့အနံ့" - ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီးနောက်သူကပထမဦးစွာအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကိုမြင်သောအခါငါစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါဟာထက်ပိုမို 15 နှစ်အကြာ, သို့သော်, ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများနေဆဲ (သင့် PC ကိုအရေးကြီးသောဒေတာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်) သူ့ကိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါအနက်ရောင်မျက်နှာပြင် - အနက်ရောင်, အများကြီးစိတ်တိုးပွား, များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ပြုလုပ်အပေါ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယျသို့က OS ကိုအတွက်အမှားအယွင်းများနှင့်မမှန်ကန်တဲ့ entries တွေကို orientation နဲ့ fix ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Mass သိုလှောင်မှုနှင့် Data Recovery အဖြစ်အန်းဒရွိုက်နှင့် internal memory mounting
ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူ, ခေတ်သစ်ကို Android ဖုန်းများရဲ့ internal memory ထဲကဓါတ်ပုံ, ဗီဒီယို, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုဖျက်လိုက်ပါနှင့် internal storage ကို MTP protocol ကိုမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ကတည်းကဆေးပြားတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်လာသည်မဟုတ်, Mass သိုလှောင်မှု (က flash drive ကိုအဖြစ်) နှင့်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ပုံမှန် software ကိုမတှေ့နိုငျ ဒီ mode မှာဖိုင်တွေ restore ။
Program ကိုနေရာလေးကို Recovery ကိုသုံးပြီး data ကိုပြန်ယူပါ
ဖြစ်ကောင်းဤသူသည်သင်တို့ကို Windows အောက်မှာ hard drive တွေနဲ့ flash drives တွေကိုဖိုင်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူရန်ခွင့်ပြုသည်သောအကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည် - ။ နေရာလေးကို Recovery ကို Data Recovery များအတွက်အစီအစဉ်ကိုအခကြေးငွေဖြစ်ပါသည်, အဲဒီအကြောင်းရေးသားဖို့ကျိုးနပ်သည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း အဆိုပါအစီအစဉ်၏တစ်ဦးကစမ်းသပ်ဗားရှင်းတရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် http://handyrecovery.com/download အပေါ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Windows အတွက် Data Recovery အစီအစဉ် Disk ကိုလေ့ကျင့်ခန်း
ဤဆောင်းပါး၌ငါ Windows အတွက် data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူ Disk ကိုလေ့ကျင့်ခန်းအသစ်တစ်ခုအခမဲ့အစီအစဉ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြည့်ဖို့တင်ပြသည်။ သူမကို format ကို USB drive ကို (သို့သော်, ဒီဟာသမားရိုးကျ hard disk ကို drive ကို၏ရလဒ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုအပေါ်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါသည်) ဖိုင်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူပါလိမ့်မယ်အဖြစ်နှင့်အညီ, တစ်ချိန်တည်းမှာ, စမ်းပါ။
PC ကိုကိစ္စများ (အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို) ရှာဖွေရေးမှာများနှင့်ဖြေရှင်းရန်
မင်္ဂလာပါ ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်သည့်အခါတခါတရံတွင်ရှိမအောင်မြင်မှုများအမျိုးမျိုးအမှားတွေ, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မဆိုအထူးဆော့ဗ်ဝဲခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏အကြောင်းတရားများရ - မလွယ်ကူသောအလုပ်! ဤဆောင်းပါး၌ငါအမျိုးမျိုးသောပြဿနာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကူညီကြမည်ဖြစ်သော PC များ၏စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်လိုက်လျောညီထွေကိုကူညီချင်တယ်။